> Resource> Atụmatụ> ngosi mmịfe mmetụta: Transition, ederede na Special mmetụta
Ị ga-ike a ngosi mmịfe na oké mmetụta gụnyere mgbanwe, ederede, ọdịyo na ọzọ pụrụ iche na-akpata? Ị pụrụ ime ya niile na DVD Slideshow Builder Deluxe - ihe niile na-na-otu ngosi mmịfe software na-ahapụ gị ka ịtụnanya slideshows na clicks. Ọ bụ ọnụ ahịa a-agbalị.
-Ahụkwa nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na-eme ka a ngosi mmịfe dị iche iche na mmetụta >>
Ọ bụ visual mmetụta n'etiti abụọ ma ọ bụ karịa ihe oyiyi na a ngosi mmịfe. Tupu mgbanwe mmetụta egosi, a slide-agbanwe ihe ọzọ ná mberede na-ekwekọghị n'okike ụzọ. Transition mmetụta ime ka gị na ngosi mmịfe anya ire ụtọ, eke na-eju mgbe ụfọdụ.
DVD ngosi mmịfe Nrụpụta abịa na ihe karịrị 100 mgbanwe mmetụta maka gị oke, gụnyere Adalata, igbari, Slide, Push, gburugburu, 3D Cube, 3D Bugharia, wdg The ọgụgụ bụ ọbụna ibu karịa PowerPoint. Random mgbanwe mmetụta ga-akpaghị aka etinyere mgbe ibubata photos ka usoro ihe omume, ma ị nwere ike mfe dochie ya site Ịdọrọ na idobe.
Ọ bụ ezie na a foto bụ uru a puku okwu, utu aha tinye ihe metụrụ gaa na otu foto ngosi mmịfe. Gị utu aha nwere ike ịbụ ka na ihe ọ bụla ọnọdụ na foto, ma ọ bụ na-esere-ewu na-ederede mmetụta nke DVD ngosi mmịfe Nrụpụta. Ụfọdụ n'ime ha bụ fancy ezu dị ka ndị na-ọkachamara videos.
Ọ bụ oké na-ekiri foto ngosi mmịfe na ndabere music. Ka ihe atụ, a udo songs maka eke foto. Na-agwụ na Adalata si audio mmetụta ka ndabere ọbụna mma.
Na DVD Slideshow Builder Deluxe, i nwere ike tinye ụfọdụ na-akpa ọchị ụda gị ngosi mmịfe. Anyị na-akpọ ha Nga Audio nke e dere anụmanụ ụda, mmiri ozuzo ụda, elekere ụda, wdg
Special mmetụta maka onyonyo, na vidiyo mfe atụgharị gị ọrụ n'ime masterpieces. Na video ma ọ bụ oyiyi edezi windows, họrọ ọkacha mmasị gị nyo mmetụta, na i nwere ike n'otu ntabi ịhụchalụ ya.
Niile ewu mmetụta na-gụnyere: Old Photo, na-ezighị ezi, Otu agba, Mozis, ghara ịma, Yellow tint, Painting, wdg
Na nkenke, site na ijikọta a niile ngosi mmịfe mmetụta, DVD ngosi mmịfe Nrụpụta weaves foto gị, videos na audios n'ime a Fantastic ngosi mmịfe na nkeji. Gbalịa ya.
Wedding Kaadị Ozi: sụgharịa Ọmụmaatụ maka a Wedding Kaadị
Olee otú Mee a Ahaziri Baby Photo Birth Ọkwà